8.3 Style Styles - Geofumadas
Ny endri-tsoratra iray dia ny famaritana ny endri-tsoratra samihafa karazana amin'ny anarana iray. Ao amin'ny Autocad dia afaka mamorona ny karazan-tsika rehetra tadiavintsika isika ary avy eo dia afaka mampifandray ny tontolon'ny lahatsoratra miaraka amin'ny fomba manokana. Ny fetra mety ho vitan'io fomba io dia ny fananganana ny endrika noforonina miaraka amin'ny sary. Saingy raha te hampiasa endri-tsoratry ny rakitra efa voarakitra ao anaty sary vaovao isika, dia misy fomba fampidirana azy araka ny ho hitantsika ao amin'ny toko natokana ho an'ny loharanon-kevitra. Ny fahafaha-manao iray hafa dia ny fanangonantsika rakitsary andian-tsoratra ary sokajy izany ao anaty modely izay ahafahantsika mametraka ny asa vaovao. Ankoatr'izay, azontsika atao ihany koa ny manova fomba iray efa misy, ny fitaovana rehetra izay mampiasa io style io dia havaozina avy hatrany eo amin'ilay sary.
Mba hamoronana fomba soratra, mampiasa ny boaty fifampidinihana amin'ny vondrona "Text" izay nianarantsika isika, na dia hita ao amin'ny lisitr'ireo fofom-borona efa noforonina aza izany, ary ankoatra izany, ao amin'ny vondrona "Annotation" an'ny " Fandraisana Na izany na tsy izany dia misokatra ny "Text style manager". Ny fomba misy amin'ny famaritana dia antsoina hoe "Fenitra". Ny soso-kevitray rehefa miasa miaraka amin'ny "Text Style Manager" dia ny tsy handraisanao fanovana amin'ny fomba "Standard" fa ampiasao ho fototry ny hamoronana ny hafa amin'ny bokotra "Vaovao". Ny hevitra iray azo ampiharina dia mazava ho azy fa ny anaran'ny fomba vaovao dia manome taratra ny faran'io fomba io amin'ny sary. Ohatra, raha handeha hametraka ny anaran'ny arabe amin'ny drafitry ny tanàn-dehibe, tsy misy mahatsara azy na dia somary mihena aza, toy ny hoe mametraka azy io "Anaran'ny arabe". Na dia amin'ireto tranga ireto aza dia mazàna ny fitsipika efa napetraka mba hilazana ny fomba itondran'ny sampana indostrialy na, na dia, amin'ny fikambanana tsirairay misy anao. Ho fitsipiky ny filaharana amin'ny tontolo fiaraha-miasa miaraka amin'i Autocad, fahita matetika ny misakana ny mpanakanto hamorona ny anarany manokana ny endriny izay mety hisy fiantraikany amin'ny asan'ny hafa.
Etsy ankilany, amin'ity fifanakalozan-dresaka ity ianao dia afaka mahita ny lisitry ny endri-tsoratra napetraka amin'ny Windows. Amin'ity lisitra ity dia ampiana ny Autocad sasany izay azonao atao ny manavaka tsara amin'ny alàlan'ny fanitarana ny ".shx". Ny karazana endritsoratra misy an'i Autocad dia manana endrika tsotra ary miasa tsara amin'ny alàlan'ny fanaovana sary ara-teknika, na izany aza, dia ho hitanao fa rehefa mamorona endrika soratrao manokana ianao, dia alohan'ny alalanao ny endritsoratra rehetra napetraka ao amin'ny solosainao.
Raha toa ka manana tarehimarika samihafa ao anatin'ilay sary ny rakitra noforonina noforonina miaraka amin'ny style iray, dia tsara ny mitazona ny haavon'ny haavony ho zero ao anaty boaty. Izany dia midika fa isaky ny maka sary an-tsoratra isika dia manontany antsika ny Autocad. Raha, amin'ny lafiny iray, ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fomba iray dia mitovy ny habeny, dia mety ho tsara ny manondro azy io, izany dia hamonjy antsika amin'ny fotoan'ny fananganana rakitsoratra, satria tsy voatery hisambotra ny haavony foana isika.
Amin'izao fotoana izao, andao hojerentsika ny "Text Style Manager" amin'ny horonantsary.
Izany matetika no mitranga fa ny haben'ny soratra dia ilaina rehefa manao ny sary, dia tsy mety raha maka sary toy izany koa ny fampisehoana ho voaresaka na namoaka elektronika, foto-kevitra hitantsika ao amin'ny toko 29 sy 30, tahaka ny any ny sasany raha ny andinin-teny tena mety ho kely na lehibe dia lehibe, izay mety hanery antsika hanitsy ny haben'ny ny samy hafa soratra zavatra ny sary, izay mety ho sarotra mampino na dia eo aza ny fampiasana ny teny fomba. Misy vahaolana samihafa hamahana ny olana. Ny iray dia mampiasa ny didy mba mitsambikina mihoatra ny haben'ny ny lahatsoratra, fa ny tena hantsana lalina manjaka dia midika fa nifidy andinin-teny hafa mba hanova zavatra, ary ny mety omitting ny sasany ka sosotra ny vokany. Ny vahaolana faharoa dia ny hamorona lamaody an-tsoratra miaraka amin'ny haben'ny fetra, mametraka ny haavony. Rehefa manolotra fampisehoana ho an'ny fanontam-pirinty isika dia afaka manitsy ny haben'ny lahatsoratra amin'ny fanovana ny fomba ampiasaina. Ny tsy fahampiana dia ny zavatra rehetra dia tokony ho ny haben'ny endri-tsoratra (na ny fomba) ampiasaina.
Ny vahaolana naroson'i Autodesk dia antsoina hoe "fananana an-kiraro", izay, navitrika indray mandeha ho an'ny endri-tsoratra noforonina miaraka amina endrika, dia mamela anao haingana sy haingana hanova ny haben'ireo zavatra ireo, na ho an'ny toerana modely misy anao. sary, na toerana famelabelarana alohan'ny hanaovana ny sary. Raha ny novana dia ny haben'ny lahatsoratra, dia tsy misy dikany na ny zavatra samihafa dia samy manana ny haben'ny endri-tsoratra, satria ny tsirairay avy dia hanitsy ilay haavo vaovao voafaritra ary mitazona ny tsy fitovian'ny habe misy azy ireo. Noho izany, tadidio fa aleo manadino ny fananana an-tsokosoko ny fomba soratra vaovao noforoninao, mba hahafahanao manova ny haben'ny fampisehoana ireo zavatra ireo amin'ny sehatra samihafa ataonao (modely na famelabelarana, izay hianarana ao. ny fotoana), tsy mila manova azy ireo taty aoriana.
Amin'ny lafiny iray, dia tena matetika ny momba ny annotative fananana toy ny mandà dimensions, foy, tolerances, mpitarika maro, vato sy ny toetra, ary koa ny teny zavatra, koa anefa , amin'ny ankapobeny, dia miasa toy izany amin'ny tranga rehetra. Izany no hianarantsika amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany, rehefa nijery ny fahasamihafana misy eo amin'ny habaka sy ny habaka.
Farany, eo am-pototry ny boaty fifampidinihana dia afaka hitantsika fa misy fizarana antsoina hoe "Special Effects". Ireo safidy telo eo ankavia dia tsy mila fanehoan-kevitra bebe kokoa satria miharihary ny vokatr'izy ireo: "Loha midina", "taratry ny havia" sy "Vertical". Ho an'ny lafiny iray, ny safidy "Width / height ratio" dia manana 1 ho sanda default, eo amboniny dia mihamalalaka tsara ny atody; ambanin'ny fifanarahana iray. Mifandimby kosa, ny "zoro oblique" dia mamily ny soratra ho amin'ny zoro tondroina, amin'ny alàlan'ny famaritana ny lanjany dia zero.
Previous Post«Previous 8.2 Fanitsiana lahatsoratra
Next Post 8.4 andalana marikamanaraka »